Fikarohana momba ny firaisana Ny tarehin'ny aretina ara-batana-renin'ny zanak'i Thomas Jefferson: Fiainana lasa teo amin'ny Annette Gordon-Reed - Fikarohana Reincarnation
Ny endrik'i Sally Hemings-renin'ny zanakalahin'i Thomas Jefferson: fiainana taloha an'i Annette Gordon-Reed
Proposed by: Walter Semkiw, MD
Nividy boky roa tamin'ny Thomas Jefferson aho vao haingana, mba hiezaka hahatakatra bebe kokoa azy. Ao amin'ny boky voalohany nataoko, Fiverenan'ny revolisionera: Niverina indray ny raharaha momba ny vatana teraka tao amin'ny vatana vaovao sy ny fanahy, dia nohamafisina fa rain'ny zanaka avy amin'i Sally Hemings i Jefferson, andevo mifangaro izay nampananany azy. Ity fanamafisana ity dia tamin'ny alàlan'ny asako niaraka tamin'i Kevin Ryerson, izay mampita torolàlana ara-panahy antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaizana manao ny fampahafantarana ny fiainany teo aloha miaraka amina mari-pahaizana avo lenta. Tsy i Ahtun Re ihany no nilaza fa i Jefferson no rain'ny zanak'i Hemings, ny sasany amin'ireo zaza dimy ireo no fantatra tamin'ny vanim-potoana ankehitriny. Tsy nambara raha nihaona indray i Sally Hemings.
Iray amin'ireo boky novidiako aho Thomas Jefferson sy Sally Hemings: Fifandroritana amerikana. Eo amin'ny fonony aoriana dia manazava fa ny mpanoratra, Annette Gordon-Reed, izay lalàna Harvard sy mpampianatra ny tantara dia nahatonga ny raharaha fa nanana fifandraisana feno fitiavana sy fahatokisana i Jefferson sy Hemings. Nohazavainy koa hoe ahoana ny mpahay tantara tamin'ny voalohany nanala ny fahamarinana momba ny razan'i Jefferson.
Tamin'ny famakiana ity lahatsoratra ity dia nanontany tena aho raha i Annette Gordon-Reed, izay afrikanina-amerikanina, mety ho reincarnation Hemings. Nandritra ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa i Gordon-Reed no reincarnation an'i Sally Hemings. Amin'ny fanoratana ny bokiny, Gordon-Reed dia manavotra ny toetran'ny Hemings.
Io no tiako resahina hoe "raharaha fampiraisana", izay mahasarika olona iray manokana ny fiainany taloha. Ireo tranga fanakorontanana hafa momba ny fifandraisana dia misy:
Trangam-panjakan'olo-tokana i Dorothy Dandridge Halle Berry
Ny lozisialy Reincarnation an'i Laurel sy Hardy | Josh sy Danny Bacher